သာသနာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်မှု	Posted on October 5, 2009	by mettayate လောကတွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်နေမိကြပြီဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် ကိုးကွယ်ရာအပိုမရှာသင့်တော့ပါ။ ရိုးရာအစဉ်ရှိနေသောကြောင့် မိမိလက်ထက်မှ ထူးချွန်ပြီး ပွဲမတင်ဘဲနေမိသဖြင့် နတ်ကိုင်မှာကြောက်လျှင် ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ပသခြင်းနှစ်မျိုးတွင် ဒါနသဘော ပသခြင်းမျိုးကား ပြုကောင်းပါသည်။
ရဟန်းများအား ခန္ဓာကို မတင့်တယ်သော ညစ်ညမ်းဖွယ်ရာအဖြစ် ရှုဆင်ခြင်ရသော အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းကို ဟောကြားပြီးနောက် ဆွမ်းပို့သောရဟန်းမှတစ်ပါး မည့်သူ့ကိုမှလက်မခံဘဲ တစ်ပါးတည်းတောသို့ဝင်၍ ၁၅ရက်ခန့် သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူသည်။ ထိုအချိန်တွင် အတိတ်တစ်ခုက မုဆိုးဘ၀ဖြင့် သူတပါးတို့၏ အသက်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသော ရဟန်းငါးရာတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုလည်းသတ်ကြသည်။ အချင်းချင်းလည်း သတ်ကြ၏။ ရဟန်းတို့ကိုကပ်၍စားနေသော မိဂလဏ္ဍိက အမည်ရှိ လူကြမ်းကြီးကိုလည်း သင်္ကန်းပရိက္ခရာများပေး၍ သတ်ခိုင်းကြသည်။ ရဟန်းအနည်းငယ်ကိုသတ်ပြီးသောအခါ ၀ဂ္ဂုမုဒါမြစ်ကမ်းတွင် သန်လျက်ကိုဆေးကြောနေသော မိဂလဏ္ဍိက သည် နောင်တများဝင်လာကာ “ငါတော့ရဟန်းကောင်းတွေကို သတ်မိပြီ။ ကြီးမားများပြားလှသော အကုသိုလ်တွေကို ဆည်းပူးမိပြီ။ ငါရတဲ့ လူ့ဘ၀ကြီးကတော့ မကောင်းတော့ပါဘူး” ဟု တွေးတောကာ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရရှာသည်။
ထိုအခါ နတ်သားတစ်ယောက် ရေပေါ် ပေါ်လာကာ “အချင်း မိဂလဏ္ဍိက စိတ်မကောင်း ဖြစ်မနေနဲ့။ သင်ဟာများစွာသော ကုသိုလ်တွေကို ဆည်းပူးမိပြီး သံသရာက မကူးမြောက်ရသေးတဲ့ရဟန်းတွေကို သင်က ကူးမြောက်ပေးလိုက်ပြီ။ သင်ဟာ လူ့ဘ၀ကို အရတော်သွားပြီ။ သင်၏ အလုပ်များသည်ကား ကောင်းလေစွ။ ကောင်းလေစွ။” သာသနာဖျက်နတ်၏ အားပေးမှု၊ နတ်ဆိုလျှင် ကိုးကွယ်ရာဟု ထင်မြင်သော မိဂလဏ္ဍိက၏ အမှားယုံကြည်မှုပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ မဟာဝုန်တော်ကြီးအတွင်းရှိ ရဟန်းပေါင်းငါးရာတို့၏ လည်ချောင်းသွေးများမှာ ချောင်းစီးခဲ့ရပါတော့သည်။
This entry was posted in မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← သာသနာနှင့် နက္ခတ်ဗေဒင်